Anonymous Mon Jan 17, 04:27:00 PM GMT+8
ှီု. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်လေးပြောပြမယ်။ နည်းနည်းပေရှည်မယ်နော် သူက အိမ်ထောင်ကျပီး ၆ လကျော်မှာ အမျိုးသားက အက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဆုံးတယ်.. နေတာထိုင်တာလည်းရိုးပါတယ် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ လုပ်တယ် .. ၂ နှစ်ကျော်ကြာလို့ နောက် ထပ်ရည်ငံတဲ့သူက ဖြစ်ချင်တော့အသိဖြစ်နေတယ်။ သူ့ မိဘတွေက အပျိုမဟုတ်လို့သဘောမတူဘူးတဲ့. အဲ့ဒီ ပြောတဲ့ အန်တီချမ်းသာ အဆင့်တန်ူးရှိကြီးရဲ့ သမီးက လက်ရှိ စ မှာ. ရန်ကုန်မှာရှိတုန်းက တွဲတဲ့ကောင်လေးတိုင်းအိမ်ပါလာတယ် ညဘက် ကားထိုးထားတယ်။ သူကတော့ တရားဝင်မအိုသေးတဲ့အတွက် အပျိုတဲ့..
ကြည်ကြည် Mon Jan 17, 04:34:00 PM GMT+8
ညဘက်ဒင်နာကို လက်ပွေ့ အိတ်ကြီးတွေကိုင်ပီး ပွဲတတ်တဲ့
GDPpercapita မှာ ဂဏန်းသေးသေးလေးနဲ့ လာတဲ့ နိုင်ငံက အန်တီကြီးတွေ ပွဲတတ်တော့ ၀တ်ထားလိုက်တာ လားလား စိန်တွေ ကျောက်တွေ ပြုးလို့နာတို့ နိုင်ငံက ရတနာပေါကြွယ်ဝတာကြည့်ထား လို့ ပြောစရာမလို ...
ဟွန်း ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံကလာတဲ့သူတိုင်း ဆင်းရဲတယ်လို့ ပြောစရာလားလို့ ...နော်
ဆိုင်လားမသိဘူး မချစ်ရာ ဒေတာတွေ လုပ်ရင်း ခေါင်းစားလာလို့ အဲလို့ တွေးမှိလိုက်တယ်.
Anonymous Mon Jan 17, 05:34:00 PM GMT+8
Ma Chit Kyi Aye,
My GF isawidow and my parents do not agree because of like what you say here ပုံစံခွက်, they think the same way as others parents do, I am so desperate.
မေဓာဝီ Mon Jan 17, 06:53:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်ရေ ... အပေါ်ယံပဲ ကြည့်မြင်သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်တာ သိပ်ဆိုးတာပဲ။ အရိုးစွဲနေတဲ့ အဲဒီအတွေးအခေါ်တွေက ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီနော် ... ။
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Jan 17, 07:10:00 PM GMT+8
အဖြူရောင်နတ်သမီး Mon Jan 17, 07:16:00 PM GMT+8
မြန်မာလူမျိုးတွေ အမြင်ကျယ်ဖို့ အများကြီးလိုသေးတယ်..။
ဘလော့ဂ်ထဲမှာ စာရေးတာ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေမှာ အမြင်ချင်း ကိုယ်သိသလောက် ဖလှယ်တာတောင်
ကိုယ့်အမြင်လေးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချမရေးရဲကြဘူး။ “မြန်မာမိန်းခလေးဆိုတာ ဘိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ” မှ..
သိပ်အမြင်ကျယ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေဆိုရင် သူတို့ကိုယူမယ့် အမျိုးသားက အိမ်ထောင်တခုမှာ သြဇာအာဏာ မညောင်းတော့တဲ့အတွက် အမျိုးသားများ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) အိမ်ထောင်ပြုဖို့ မိန်းမရှာရင် အရမ်းထက်မျက်တဲ့ မိန်းခလေးမျိုးကို မရွေးဘူး..တဲ့လေ။
အဲဒီအတွက် မြန်မာမိန်းခလေးတွေကလည်း (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) ပုံစံခွက်ထဲမှာပဲ နေနေကြသတဲ့..။
အတွေးလေးတွေကအစ ပုံစံခွက်ထဲ ရောက်နေကြပုံပြောပါတယ်..။
(စာလုံးပေါင်းမှားသွားလို့ ပထမရေးထားတဲ့ comment ကိုဖျက်လိုက်တယ်နော်)
ညီမလေး Mon Jan 17, 08:10:00 PM GMT+8
အင်းးးးး ပုံစံခွက်ထဲ အထည့်လွန်လို့ ထင်တယ် ချစ်ချစ်ရေ...ပုံစံခွက်ကလဲလွတ်ရော ...........
Sunny Mon Jan 17, 08:57:00 PM GMT+8
တခြား အကြောင်းအရာတွေ သိပ်မဆွေးနွေးတတ်ပေမယ့် ပညာရေးမှာတော့ မြန်မာတွေ ဆရာဝန်မှဆိုတဲ့ ပုံစံခွက်ထဲက လွတ်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်.. ဆရာဝန်ပေါက်စတွေကလည်း မိဘပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့် တခြား professional အလုပ်က လူတွေကို လူမထင်တာမျိုးတွေလည်း တွေ့ဖူးရပါတယ်.. အားလုံးကိုမဆိုလိုပါ.. တချို့ တချို့မျှသာ ဖြစ်ပါတယ်..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Mon Jan 17, 10:42:00 PM GMT+8
ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါတစ်လေတော့ ပုံစံခွက်ဆိုတဲ့ စံနဲ့ တိုင်းမိနေတုန်းဘဲ..
တစ်သက်လုံး စွဲခဲ့တဲ့ အစွဲအလန်းဆိုတာ စွန့်နိုင်ဖို့ခက်တာလဲပါမယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်တာလဲ ပါမယ် ..
တစ်ချို့ စံတွေကိုတော့ လုံးလုံး မကြိုက်ပါဘူး
တစ်ချို့ကိုတော့လဲ လက်ခံမိနေတုန်းပါဘဲ. အ၀တ်အစားနဲ့ အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာမျိုးကတော့ လုံးဝ စွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်.. လူတွေက ဟန်ဆောင်တတ်သူတွေ များလာပြီဆိုတော့ အပြင်ဘန်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
ခနွဲ Tue Jan 18, 01:44:00 AM GMT+8
အပြင်ပန်းကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်သင့်တော့ လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။
rose of sharon Tue Jan 18, 06:17:00 AM GMT+8
ပုံစံခွက်ဆိုတာ သူ့နေရာနဲ့သူဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်... လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ပုံစံခွက်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေဘို့ ပုံစံခွက် ကလဲ အလျှော့အတင်း ရှိသင့်တာပေါ့... အပေါ်ယံကြည့်ပြီး တန်ဘိုးဖြတ်မဲ့ ပုံစံခွက် မျိုးကတော့ ဒီခေတ်မှာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး....
Anonymous Tue Jan 18, 10:41:00 AM GMT+8
Who care....What U Think....
The world is flat and People Get what They want....
But Used Girl is Used Girl...Nothing to be Proud in Society....
Loser Only appreciate used Girls....
An Asian Tour Operator Tue Jan 18, 05:14:00 PM GMT+8
ပုံစံခွက်လဲ ရှိတယ်။ ပုံစံခွက် လုပ်တဲ့ မို (mold) လဲ ရှိတယ်။
Ko Boyz Tue Jan 18, 07:28:00 PM GMT+8
ကလူသစ် Tue Jan 18, 10:15:00 PM GMT+8
ဖိနပ်သေးနေလို့ ဖနောင့်ဖြတ်ချတာလေးတွေလဲ လုပ်ပါအုန်း
ဝက်ဝံလေး Wed Jan 19, 06:13:00 AM GMT+8
ဟင်းးး ဟင်းးး ယောက်ျားတွေ အကြောင်းလဲ ပြောချင်ပါသေးတယ် သမီးသူငယ်ချင်းပေါ့ အသက်က သမီးနဲ့မှ ရွယ်တူ သမီးထက် ငယ်ပါတယ် သူက မိန်းကလေးတွေကို စားချင်သလိုစားတယ် ကြေးနဲ့လဲ စားတယ် သူ့ရည်းစားတွေကိုလဲ စားတယ် ပြီးတော့ သူက ဘာပြောလဲဆိုတော့
“ငါမိန်းမယူရင်တော့ အပျိုကိုပဲယူမယ်” တဲ့ သမီးပြန်ပြောလိုက်တယ် “နင်အဲလောက်စားပြီးမှတော့ နင်လဲလူပျိုမဟုတ်တော့သလို နင့်ရတဲ့မိန်းမလဲ မစစ်လောက်တော့ဘူး” လို့ (ရင့်သီးသွားရင်ခွင့်လွှတ်) ဒင်းက ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့
“ငါက မြန်မာလူမျိုးလေ” တဲ့ အော်...ဟော်... စားတုံးကတော့စားပြီးတော့ မိန်းမယူခါနီးတော့
ပို့စ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုလဲ ဆော်ရီးနော် မချစ် ခစ်ခစ်
Anonymous Wed Jan 19, 10:22:00 AM GMT+8
အင်ကြင်းသန့် Wed Jan 19, 01:05:00 PM GMT+8
အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီး တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတာ လုံးဝအသေအချာပါပဲ အစ်မချစ်ရေ.....ကိုယ်တွေ့တွေကိုသာ ချရေးပြရရင် ပိုစ့်တစ်ပုဒ်စာလောက်မက ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ မရေးပြတော့ဘူး....။
(ဘိုင်သည်ဝေး....စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်လေးမို့လို့ facebook မှာ share လိုက်မယ်နော်....နော်...နော် :))
Anonymous Wed Jan 19, 04:05:00 PM GMT+8
မရေ..ဖတ်သွားတယ်..ယွန်းလဲ အစ်မချစ်မြင်သလို မြင်မိတယ် ..
တခါတလေလဲ စည်းတွေဘောင်တွေ တွေးမိပြန်ရော..
မိုးယံ Wed Jan 19, 05:05:00 PM GMT+8
အလယ် အလတ်လောက်ပဲ ကောင်းပါတယ်..
Anonymous Thu Jan 20, 04:36:00 PM GMT+8
ခွန်မြလှိုင် Wed Jan 26, 03:15:00 AM GMT+8
facebook မှာလိုဆိုရင် အခါတထောင် လိုက်ခ် ပစ်လိုက်မယ်။ ပုံစံခွက်တွေကို ပြောင်းလဲမယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ပုံစံခွက် အသိုင်းအ၀ိုင်း ထဲက ထွက်လာတဲ့ လူဆိုရင် ပုံစံခွက်ကြီးပဲ လာမှာပဲ ဆိုပြီး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီး ပုံစံခွက် အတွေးကြီးနဲ့ စွပ်စွဲလိုက်တာလဲ ကြုံဖူး တယ် အမချစ်ရေ... တယ်လဲ မာယာများတဲ့ ပုံစံခွက်... သတိကြီးကြီး ထားပြီး ဖယ်ရမယ့် ပုံစံခွက်။